Fifidianana Tao Iràna: Bilaogera Diso Fanantenana · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Tao Iràna: Bilaogera Diso Fanantenana
Voadika ny 03 Novambra 2017 3:27 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jona 2005)
NOTE: Lahatsoratra nohavaozina isaky ny misy fanehoankevitra tonga.
Nivoaka ny vaovao, Rafsanjani sy Ahmadinejad ireo roa nahazo vato tsara indrindra ka hiatrika ny fihodinana faharoa. Tsy nahovoka firy ilay hany kandidà avy amin'ny mpanohitra no sady nandrandrain'ireo bilaogera, ny reformista Dr. Mostafa Moeen, izay manana ny bilaogny manokana.
Taorian'ny fitsidihana ny foiben-toeran'ny fampielezankevitr'i Moeen, raha mbola teo am-panisàna ny vato, nampita ny fanantenany i Hossein Derakhshan (Hoder) hoe hiatrika fihodinana faharoa i Moeen. Diso fanantenana izy ireo. Hitan'i Hoder fa ny tanjak'i Ahmadinejad sy Karrubi, ilay kandidà iray hafa mpifikitra amin'ny nentindrazana, dia vokatry ny “elanelan'is teo amin'ny kilasy ambony sy ny kilasy ambany. Ny fifidianana an'i Ahmadinejad sy Karrubi dia midika tsy fahafahampo goavana amin'ny fidirambolan-dry zareo.”
Ao anatin'ny lahatsorany manaraka, vantany vao fantatra ny valiny dia manoratra i Hoder hoe :
Na toa aza i Rafsanjani ka ho any amin'ny dingana faharoa miaraka amin'i Ahmadinejad, hiasa indray ny milim-pifidianan'i Khamanei ary hametraka an'i Ahmadinejad ho filoha vaovao hitondra ny Repoblika Islamikan'i Iràna.
Tena diso fanantenana sy ketraka tanteraka ireo tanora mpandàla fihavaozana. Tsy misy mahafantatra izay mbola hiseho. Saingy i Khamenei no mpandresy goavana tamin'ity lalao ity. Izy ankehitriny no manana ny fandraisana anjara betsaka indrindra (miampy ompa kely amin'ny fanodnro adala ho an'i Bush), no sady sarintsarinà filoha izay fanarontsaronana fotsiny ny hajany.
Mr. Behi dia manondro lahatsoratra iray tao amin'ny Commondreams.org. Ny fehezanteny voalohany tamin'ilay lahatsoratra: “Misy tombontsoa itoviany ireo mpitondra fivavahana tena mpametraka faneriterena ao Iràna sy ireo tena faran'izay fatra-pandàla ny resaka tafika ao Etazonia: Samy hetahetan'izy ireo ny hahita ny tsy fahombiazan'ny fikatrohana Iraniàna hisian'ny demaokrasia sy ny zon'olombelona.” Mr. Behi manoratra avy eo hoe:
Ity lahatsoratra mahafinaritra nosoratan'i Norman Solomon ity no tena famakin'ireo Iraniàna te-hahita an'i Bush ho avy hamonjy azy ireo. Tena tsapa io aty Iràna ary tamin'ny tranga farany omaly rehefa injay ny fahitalavitra nientanentana ery tamin'ilay kabary vao haingana nataon'i Bush manohitra ilay fifidianana (tsy milaza aho akory hoe diso ny votoatin'ny kabariny) fa iny no tena fanomezana lehbe indrindra azon'i Bush nomena ireo mpifikitra amin'ny nentindrazana izay miandry mandrakariva ny kabary tahàka ireny hiantsoana an'i Etazonia ho fahavalo voalohan'ny firenena tamin'ny fandrehetana sy fanararotana ny dikan'ny atao hoe fitiavan-tanindrazana eny anivon'ny vahoaka.
(Jereo eto ny resaka nifanaovan'ny GV tamin'Ing. Behi. )
Iranian Truth koa mihevitra (rohy maty) ny kabarin'i Bush manilika ilay fifidianana ho toy ny tsy ara-pomba demaokratika, nampiasaina hitsotsofana fihetsehampo nasionalista eny anivon'ireo mpifidy.
Omid mahita tsy fifanarahana eo amin'ny Minisitry ny Atitany sy ny Filankevitry ny Mpiambina.
Manana fandrakofana momba azy ity i Iran Votes 2005.
Bilaogy misimisy kokoa avy amin'ireo Iraniàna momba ny fifidianana :
Blogging Iran's Election ao amin'ny Opendemocracy.
Bloggers in Iran avy amin'ny The Nation.